Uma okungenani kanye ebhekene isidingo ugcwalise noma yimaphi amadokhumenti nokukhokhwa ebhange, khona-ke nakanjani kufanele ugcwalise nensimu emila ucacise BIC elihambisana ebhange. Lokhu zasesiteji lubalwa kuphoqelekile zonke zokuthenga ngesikweletu futhi isho ukuqaliswa remittances, ukuklanywa oda lokukhokha, izincwadi wesikweletu nokunye .. Emazweni amaningi, ibhange omusha ngamunye inikezwa BIC esiyingqayizivele. Kuyini, futhi kwakhiwa kanjani it is, uzofunda ngokufunda kulesi sihloko.
BIC: emazisayo ke futhi ngayiphi injongo
Elikumelelayo isifinyezo of zasesiteji ngokuthi "Bank Isikhombi Ikhodi" - kukuvumela ukuhlonza inhlangano yomthetho indawo, kanye ulwazi mayelana nesikhathi indalo yayo. Ngakho, ngokwazi BIC, ungakwazi ukuthola okuyinto isihloko inhlangano futhi uma wavulwa.
Ukubhaliswa yasebhange ukuhlonza amakhodi ebhange main wemfanelo kuleli zwe - Central Bank of Russia. Muhle ku kuyingxoxo eqhubekayo isisekelo somhleli Bykov yeRussia. Okungenani nyangazonke ibhange elikhulu nohlobo ilungisa ukwaziswa kulezi imininingwane, okuyinto lilondolozwe lwemibhalo ekhethekile. I-oda reference, kanye kakhulu isakhiwo BIC, akhonjwe Regulations CBR inombolo 225P ka 2003.
Isakhiwo Bika: assort ngokuningiliziwe
Ake sihlolisise lokho uku Nir. Uyini esehlukile nendlela wawubumba is ngayinye sikhungo credit. Okokuqala kumelwe kushiwo ukuthi ephikelelayo zasesiteji inombolo kwamadijithi (noma kunalokho, izingcezu), okuyinto njalo 9. Lokho kungenzeka ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi indawo osebenza elilodwa noma kwelinye ibhange, futhi iyunithi ethize (ehhovisi), okuyinto waziphatha isiphetho kwamakhasimende -kassovym.
Inani ibhithi Beek
BIC njalo ukufunda kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla. Cabanga ngokuthi yini ehlukile ngamunye idijithi izinombolo aggregate yebhange ikhodi ukuhlonza:
Eyokuqala Izinombolo ezimbili (izingcezu 1-2) - iphuzu ebhange okuqondene esimweni esithile (bhalisiwe ezweni). amabhange BIC Russian njalo iqala nge amadijithi "04".
Eyesibili Izinombolo ezimbili (izingcezu 3-4) - Ikhodi eRussia, kunikezelwe ngokusho National Ukwahlukanisa (OKATO) uhlukanisa izinjongo zokuphatha-indawo ngesisekelo. Le khodi ibonisa isihloko Russian Federation, lapho Bank ngumhlali lotsite. Uma isikhungo credit abatholakala ngaphandle kwe-Russia, isethwe "00".
Okwesithathu Izinombolo ezimbili (izingcezu 5-6) - inombolo kamazisi ethile yasebhange division usebenza inethiwekhi zokuhlala Central Bank ngaphansi kwazo. Ingabe washintsha esuka "00" ukuba "99".
I last amadijithi amathathu (amadijithi 7-9) - inombolo yesikhungo credit (noma igatsha lawo) e division of the Bank of Russia, okuyinto wavula akhawunti yayo umlobeli. Can ziyashiyana kusukela "050" ukuze "999". Ukuze izikhungo imali yokukhokha Bank of Russia lezi esithweni (7, 8, 9) inikezwa inamba "000". Ukuze main zokuhlala nendawo - "001". Ukuze zonke ezinye ukwahlukana inethiwekhi Bank of Russia izibalo - "002".
Ngakho, ibhange ukuhlonza ikhodi wesikweletu naleyo nhlangano uhlukile futhi ayifani ne imininingwane eqondene kwamanye amabhange.
BIC ngesibonelo Sberbank eRussia
Ake sibheke isibonelo salokhu kwakhiwa kanjani is zasesiteji. Ngokuvamile izakhamuzi sibe nesithakazelo ebhange BIC "Sberbank eRussia". It iyohlola. Lokhu makube ehhovisi main, elise eMoscow. BIC lakhe - 044525225 lapho:
04 - ikhodi Russia;
45 - ikhodi eMoscow;
25 - inani egatsheni;
225 - Inani okunemibandela KO division isiphetho inethiwekhi CBR. (Kubalulekile ukwazi ukuthi le nombolo kumele ngempela uqondane ezintathu zokugcina zenombolo akhawunti umlobeli we iklayenti.)
Kuphi futhi kanjani lokho ngithola ulwazi mayelana BIC
Uma ugcwalisa imibhalo edingekayo BIC ebhange, tfola akunzima. Okokuqala, zasesiteji kumelwe nakanjani ibekwe kuwebhusayithi ye sesikweletu uqobo. Ngenxa yale njongo kukhona esigabeni esihambisanayo - "Yokuxhumana", ukufinyelela okuyinto livulekele bonke. Okwesibili, le mininingwane kwalo lonke usebe Russian ayatholakala kwi-website esemthethweni ye-Central Bank. Lolu lwazi lutholakala esigabeni "Ulwazi Credit Izinhlangano", ngokukhetha "Directory" futhi upheqa ebhange lakho.
Lapho sidinga BIC?
I-BIC ziwusizo? Uyini ikhodi (ngaphezu Informant mayelana nendawo ethile indawo lesikhungo credit) I- amaklayenti asebhange? Lokhu zasesiteji ngibopha edingekayo ukusungula zonke izinkokhelo cashless, kanye nanoma yikuphi ukudluliselwa / reception izindlela nokuthunywa izinkokhelo. ugcwalise imibhalo yokukhokha ngeke kwenzeke ngaphandle kwalo.
Ngakho, siye sacabangela lonke ulwazi eyisisekelo ephathelene ezifana imininingwane ebalulekile yasebhange BIC. Manje akufanele ube nobunzima ekugcwaliseni amadokhumende uma uhlangabezana ensimini ofuna ukungena BIC yebhange lakho.
Yini nendlela ukugeza upende off jeans